Ubungqina bonyango olubandayo lunokunyanzeliswa kwamanyathelo atshisayo kumzimba. Ukupholisa kakhulu (ngamanye amaxesha ukuya kwi -200 C) kubangela ukucuthwa okubukhali kwemithambo yegazi, emva koko batyuka kancane. Ukukhawuleza kwehlisa izinga lokushisa kubangela ukuba umzimba usebenze ngokukhawuleza zonke iinkokeli zokukhusela kunye nezixhobo - ukuzivikela kumzimba, i-endocrine, i-neuro-moral, isondo. "Ukuhlanganiswa kwe-Universal" kukhawulezisa iinkqubo zokuxilisa, kuphucula ukushisa kwegazi kunye nokuhamba kwegazi kwiifom. Izixhobo ze-Cryoprocedures, okanye izixhobo ze-physiotherapeutic, unyango olubandayo luyaqina kwaye luqeqesha umzimba, luyivuselele, lukhusele umzimba kwaye luvuselele iiseli, luphucule imeko yesikhumba, lukhuphe uxinzelelo kwaye lukhuthaze ukukhululwa kweengxenye ezongezelelweyo ze-hormone ze-endorphins. Inqubo nganye yeentlobo ze "cryo" ineziganeko zayo.
Umzimba uphathwe ngokukodwa okanye uphelele ngokupheleleyo kwibhokisi ekhethekileyo ekhangeleka njenge-solarium. Iqondo lokushisa kwi-sauna enjalo yi--160-180 C. Imilenze kunye nezandla zikhuselekile ngeesokisi kunye neemittens, kunye nezitho zokuphefumula ezinekhanda okanye ibhanki. Imizuzu engama-2-3 ukushisa kwesikhumba kwehla ku-0 C (ngoxa ubushushu bomzimba buhlala buqhelekileyo).
Akunakwenzeka ukubamba isikhalazo kwi-cryosauna, i-ice jet isebenza ngokuthe ngqo kwesikhumba, ngoko akufanele uxhalabele ngamalungu angaphakathi. Emva kweseshoni yokuqala, ukuphuculwa kweentlalo-ntle kubanzi, kwaye akukho naluphi uhlobo lwe-syndrome engapheliyo. Ubuthi buzalisa umzimba ngamandla kwaye ixesha elide livumela ukujamelana nokunyamezeleka. Iimitha zamanzi ezinobumba ziphucula i-microcirculation kwesikhumba, zomeleze i-turgor kwaye zivuselele. Ngoxhaswa lwenkqubo ungasusa umphumo we-goosebumps kunye ne-acne. Ukufudumala kweshushu kukhuthaza ukulahleka kwesisindo nokuphelisa i-cellulite. Ngethuba le nkqubo (kwaye akusiyo imizuzu engaphezu kwemi-3), unokulahlekelwa ngu-2000 kcal. Kwaye iiseshoni ezili-10-20 - zilahle ngokupheleleyo "i-orange peel" kwaye ulahlekelwe isisindo nge-7 kg. Abanikazi bezitho ezincinci abananto yokwesaba, abajongene nokulahleka okunjalo, kuba isenzo esona sikhulu se-cryosauna sisisigxina sobunzima.
I-cryotherapy ngokuqhelekileyo ayiyingozi kwaye ayinayo imiphumo emibi, kodwa iingcali zincoma ukuba "ziya ngaphantsi kweqhwa" kunye ne-postinfarction okanye i-post-stroke, isifo esixinzelelekileyo kunye nokusilela intliziyo, ukuxhamla, isifo sofuba kunye nokunyanzelana komzimba.
Ukusikwa kwesandla ebusweni nentamo kwenziwa nge-cotton swab edibeneyo kwi-nitrogen (iqondo lokushisa lifikelela -200 C). Ukuchukumisa ngokukhawuleza isikhumba, i-beautician ayiyikuyichitha imizuzwana engaphezu kwe-10 kunye nemigca yokupakisha kunye neengongoma. Ukuqhagamshelana okufutshane kunye ne-nitrogen akuyingozi. Okokuqala, kukho ukuvutha komlilo, kwaye ulusu luqala ukuphazamiseka, njengokungathi uvele nje uhamba ngeqhwala. Ukwelashwa kweqhwa ngokucokisekileyo kufudula kwaye kugqabise isikhumba ebusweni nasentanyeni, kuholele izihlunu zibe yintsholongwane kwaye kususe imveliso ye-metabolic, kuphelisa ukonakala kunye nokugqwesa-ukukhetha okufanelekileyo kwesikhumba esikhulileyo! Ngokukhawuleza ukukhanya kuphucula, ii-pores zincinci kwaye zicinywa.
Enye indlela ehamba ngayo ye-physiotherapeutic izixhobo zonyango olubandayo yi-apparatus massage apho i-nitrojeni inikwe kwi-nebulizer.
Iqondo lokushisa likhethwa liqwalasele i-state, umbala, ubungakanani kunye nesantya sokwanda kwesikhumba. Ukuba ngexesha leseshoni uzizwa ungahambi kakuhle, izinga lokubanda liya kutshintshwa. Isiphumo esiphezulu siphumelele emva kweeseshoni ezi-5. Kunconywa ukuba ubenze ngekhefu kwiintsuku ezimbalwa, kwaye ikhondo elilandelayo akufanele lenzeke kude kube ziinyanga ezintandathu kamva. I-Cryomassage iyasebenza kakhulu ekunyamekeleni isikhumba seengxaki: iiseshoni zinciphisa umveliso we-sebum kwaye ziyanciphisa ukutshaya ngenxa yesenzo se-bactericidal. Ukungqinelana nokunyamekela okunjalo kubantu abanomkhuhlane onobuchule kunye nezitya ezikufutshane, kunye nabo banobandezeleko obushushu, i-conjunctivitis okanye izifo ezivuthayo zendlebe, umqala, impumlo.
Eyona nto ibonakalayo
Ukuba iziqhamo zangaphambili zasebenzisa i-ice ukuze zidibanise umphumo kunye nokuqala ngokukhawuleza kwempembelelo yobugcisa, ngoku i-cryopilling enye yeendlela eziphambili kakhulu zokuvuselela. Yenza inqubo nge-cotton swab okanye phantsi komlambo we-nitrogen. Ubushushu bobuninzi obusetyenziswe elukhumbeni lu malunga ne-80-110 C, kwaye ixesha lokuchasana lihluka ukusuka kumasekhondi ama-5 kuya ku-30. Njengomphumo wokutshatyalaliswa kwendawo ephezulu yamaseli e-epidermal kunye nokupholisa ngokwaneleyo izalathisi ezinzulu, ukukhuthazwa kwe-collagen kunye ne-elastin fibers kwenzeka. Imisipha emihle iyanyamalala, amacwecwe amancinci ahlanjululwa, ukuveliswa kwe-collagen kunye nokuvuselelwa kweseli kuphuculwa. Ukuchaneka kweqhwa elichanekileyo lokuphumelela kuqhathaniswa nokusetyenziswa kwe-glycolic acid. Kodwa ngelo xesha ungeyongelwa, akukho ukutshisa, akukho kubomvu, akukho ukuvuvukala okunamandla. I-Cryopiling ikwajongana neziphoso ezinzulu ngokwaneleyo - iilts, izibazi, i-acne. Enye inzuzo yale ndlela yintlungu yayo. Uza kuziva nje ngento encinane. Inkqubo enzulu iqukethe iinkqubo ezimbini ngeveki ngenyanga. Kwaye ukuphikisana okuphambili kukufutshane kwama-capillaries.
Ukugqithisa okujulileyo-cryodermabrasion okanye ukutshintshwa komatshini we-upper layers ye-epidermis kunye neengcinci ezincinci zeqhwa elomileyo-kuya kunceda ukulahla amabala asele emva kwe-acne, kwaye mhlawumbi ukusuka kuyo nayiphi na imiba. Ukunciphisa umngcipheko we-pigmentation ogqithiseleyo, i-cryodermabrasion, njengazo zonke iinkqubo zokuvelisa isikhumba, kulungele ukuhlaselwa.
Kwi-cryoelectrophoresis, iziyobisi zikhethiweyo kuxhomekeke kwingxaki kwaye zibafake. Kwaye ngoko ngoncedo lwe-current pulsating lwenziwa kwiindawo ezinzulu zolusu. Izidakamizwa zingene ngaphakathi kweseli kwaye, ngenxa yobushushu obuphantsi, zenze ngokukhawuleza. Oku kuphucula umphumo wabo. Ngokuncedwa kwiiseshoni eziliqela ze-cryoelectrophoresis, unokuthi ukuhlaziya ubuso ebusweni, iinkophe, intamo kunye nokugqithisa ixesha elide. Inkqubo iya kunceda ukuxazulula kunye neengxaki ezingafaniyo nokutya-ukungcola kwezandla kunye namathanga, ukungabikho kwe-elasticity of the breast. Le yilungiso elihle kakhulu lokulwa ne-cellulite kunye ne-fat deposits. Nangona kunjalo, iiseshoni zichasene phambi kwezifo zentsholongwane.
Ukukhwabanisa (kubanda, kubangela ukufa kwesisu) kunye ne-aerocryotherapy (umlambo womoya ocolileyo) ujonge ukuphelisa ukungapheleli kwesikhumba. Ukuba okokuqala kungenakucinywa ukuba kususwe zonke iintlobo zeziphene - i-warts, i-papillomas, i-markmark zokuzalwa kunye namacwecwe amnyama, okwesibini imiselwe emva kokuhlinzwa, i-laser resurfacing, i-peelings peelings, xa kuyimfuneko ukususa intlungu, ukuvuvukala nokuvuvukala kwesikhumba ngexesha elifutshane.
Ngaphambi kokuba kudlule i-cryoprocedures, kubalulekile ukuxelela ingcali yembali yezifo zakhe kwaye umbuze malunga neempawu ze-cryoappar kunye nokuvakalelwa. Yaye ukhumbule ukuba umphumo wokubaluleka unokunikezelwa kuphela yi-cosmetologist ngemfundo yezokwelapha.
Inemia ye-Anemia okanye i-vitamin B12, yintoni ingozi?
Ukutshatyalaliswa kwe-anaphylactic kaninzi kangakanani
Indlela yokuphatha umhlaza we-pancreatic?
Izongezo zokutya ezinobungozi kunye namadayi kubantu
Ziziphi iivithamini kufuneka ndiyisele ukuze zihle kunye nolutsha?
Ukutya okukhawuleza kumadoda
UVolochkova wahlambalaza, egculela umceli kwi-Moscow Ring Road, ividiyo
I-Raspberry panna cotta
Izesekeli zokwandiswa kweetonki
I-Recipe ye-potate pie
Ingulube eneziqhamo kunye nokuzaliswa kweberry
Inwele kunye nokunakekelwa kwesikhumba
Izicathulo ezibiza kakhulu kwihlabathi
Sporesh: iipropati, zokupheka, isicelo
Ziziphi iinkqubo ze-spa
Indlela yokubuyisela isikhumba iintsuku ezili-10 ekhaya?
Yintoni enokuyenza xa umntu obathandayo engabibizi
I-kroti: izakhiwo ezincedo entwasahlobo
Indlela yokugqoka iingubo ezide kunye nengubo?